Zhizha Ruzha, iyo Springfield mutambo muunganidzwa | Bezzia
Maria vazquez | 11/05/2022 18:00 | Chii chandinopfeka
Uri kuenda kune imwe yei mimhanzi mimhanzi izvo zvichaitwa muzhizha munyika yedu? Kana zvakadaro, the zvipfeko zvemutambo iyo Springfield inokupa mune yayo nyowani Zhizha Ruzha rwekudhirowa, inogona kuve yakanakisa imwe nzira yekufamba-famba wakasununguka uye zvakanaka. Tsvaga iyi muunganidzwa wemutambo weSpringfield!
Mutambi Begona Vargas uye boka reHinds rinokweretesa mufananidzo wavo kune iyi kambani itsva yemushandirapamwe umo madhirezi akadhindwa, hembe dzedenim uye misoro yakachekwa yema crochet inoita basa guru. Nguo dzakareruka dzizere neruvara dzinokukoka iwe kuti unakirwe.
Iyo femu yakakwanisa kugadzira patsva mumushandirapamwe uyu Rusununguko kunzwa uyezve zvemafaro atinosanganisa nawo mitambo yemimhanzi. Zvakazviita kuburikidza nemamiriro ezvinhu uye zvimwe zvinhu zvakadai sezvipfeko: huduku, hutsva, uye neiyo hippie yekubata iyo inogara inoshanda mune idzi nyaya.
Makiyi eInzwi reZhizha
Mapfekero ehembe Vane basa guru mukuunganidza uku. Vane miviri yehuchi, uta pamatambo, ruffles pajasi ... zvinyorwa zvinovapa kutsva uye kufamba. Pfupi kana midis inosanganiswa neshangu dzakapfava uye bhutsu dzemombe.
Crochet ndiyo imwe kiyi yeiyi Springfield festival collection. Iyo tambo yepamusoro, ine sikweya neckline uye crochet maruva mumavara echifukidziro, ingangove imwe yezvidimbu zvinokwezva zvakanyanya kutarisisa muunganidzwa uyu, asi kwete chete, sezvo iwe uchange uine nguva yekuona.
Pamwe chete nepamusoro pemakona, iyo maruva anodhinda akacheka pamusoro. Izvi zvinosanganiswa nezvipfeko zve denim: mabhuruku, masiketi mapfupi uye mapfupi. Kunyangwe iwe uchigona zvakare kubheja pane seti yet-shati kana blouse uye vest. Uye ndezvekuti mavheti ane embroidery yemadzinza ndeimwe yezvikumbiro zveSpringfield zvemitambo inotevera.
Iwe unofarira here zvikumbiro zveiyi Springfield mutambo muunganidzwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Zhizha Ruzha, muunganidzwa wemutambo weSpringfield
Kuonekana nekuneta kumeso